तालिवान पाकिस्तानकै दोहोरो नीतिको उपज हो ? पश्चिमा राष्ट्रहरु पाकिस्तानसंग सशंकित बन्दै « News24 : Premium News Channel
तालिवान पाकिस्तानकै दोहोरो नीतिको उपज हो ? पश्चिमा राष्ट्रहरु पाकिस्तानसंग सशंकित बन्दै
काठमाडौं । केही पश्चिमा शक्तिहरुले पाकिस्तानको सहयोग रहेमा उनीहरु नयाँ तालिवान शासनलाई प्रभावित गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आएका छन् । यस्का लागि पाकिस्तानले मध्यस्थताको भूमिका खेल्नु पर्ने अपेक्षा उनीहरुको छ । पाकिस्तानसंग अफगानिस्तानको सम्बन्ध धेरै विशेष मान्ने गरिन्छ । दुवै देशको १६०० माईल लामो सीमाना मात्र होइन धेरै अर्थमा सम्बन्धमा प्रगाढता पनि छ ।
पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच एक व्यापार साझेदारी छ। त्यहाँ सांस्कृतिक, जातीय र धार्मिक सम्बन्धहरु पनि छन्।अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति हमिद करजईले एक पटक दुई देशलाई छुट्ट्याउन नसकिनै भन्दै दाजुभाइको रुपमा वर्णन गरेका थिए।
यही कारण पनि विश्वका केहि देशहरु अव पाकिस्तानसंग आफ्नो सम्बन्ध सुधार गर्न चाहन्छन्।
पाकिस्तानलाई जिहादी चरमपन्थीविरुद्ध चलिरहेको युद्धमा एक विश्वसनीय सहयोगीको रूपमा देखिएको छैन। अमेरिका र अन्य सबै देशले पाकिस्तानलाई तालिवानलाई सहयोग र समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
तर, इस्लामाबादले यी आरोपहरुको खण्डन गर्दै आएको छ । यसको बावजूद, पश्चिमी देशहरुका राजदूतहरु तालिवानलाई उनीहरुका नागरिकहरुलाई अफगानिस्तान छोड्न, मानवीय सहायता र सहायता आउन र सरकारलाई बिस्तारै चलाउन अनुमति दिन चाहन्छन्।
अफगानिस्तान र तालिवानसंग पाकिस्तानको सम्बन्ध कस्तो छ?
आलोचकहरुले पाकिस्तानलाई अफगानिस्तान र तालिवानको स्थितिको फाइदा उठाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणपछि पाकिस्तानले आफूलाई उग्रवादविरुद्धको युद्धुमा अमेरिकाको सहयोगीको पक्षमा उभ्याएको थियो ।
यी हमलाको योजना अफगानिस्तानको भूमिमा बनाईएको थियो। तर जब पाकिस्तानले उग्रवाद विरुद्धको युद्धुमा आफूलाई अमेरिकाको साथी भन्दै थियो, उही समयमा उसको सेना र खुफिया एजेन्सीहरुको एक हिस्सा अफगानिस्तानमा संचालित इस्लामिक समूहहरुसंग सम्बन्ध कायम गर्दै थियो ।
यो दाबी गरिएको छ कि पाकिस्तानको यो गोप्य सुत्र र संयन्त्रहरु कयौं अवसरहरुमा चरमपन्थी समूहहरुलाई महत्वपूर्ण सहायता प्रदान गर्नको लागि प्रयोग गरिएको छ । विश्लेषकहरु विश्वास गर्छन् कि पाकिस्तान अफगानिस्तानमा आफ्नो सहभागिता चाहन्छ ताकि यो सुनिश्चित गर्न सकोस् कि त्यहाँ भारत समर्थक सरकार गठन भएको छैन ।
तर त्यहाँ तालिवानलाई कति हदसम्म र कहिलेसम्म पाकिस्तानले समर्थन जारी राख्ने भन्ने बारे पनि विवाद छ । तर पछिल्लो पटक तालिवान २० वर्ष पहिले अफगानिस्तानमा थियो, पाकिस्तान तालिवान शासनलाई औपचारिक मान्यता दिने केही देशहरु मध्ये एक थियो।
जब गत महिना तालिवानले काबुल नियन्त्रणमा लिएको थियो, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले घोषणा गरे कि तालिवानले दासत्वको बन्धन तोडेको छू।
पाकिस्तान केमा चिन्तित छ ?
तालिवानलाई पाकिस्तानको ऐतिहासिक समर्थनको अर्थ यो होइन कि यो काबुलमा आफ्नो नियन्त्रणमा पूर्णतया सहज छ ।
विगतका वर्षहरुमा, धेरै इस्लामिक चरमपन्थी समूहहरुको आतंकवादी हमलाहरुसंगै पाकिस्तानलाई ठूलो क्षति पुर्याएका छन् र यी आक्रमणहरु अफगानिस्तानको छेउबाट सीमा पार गरिएको थियो ।
काबुलमा नयाँ सरकार आएसँगै पाकिस्तानले अल कायदा र इस्लामिक स्टेट खोरासन जस्ता चरमपन्थी समूहहरुबिरुद्ध कारवाही गर्ने आशा गरेको छ। यसको मतलब यो हो कि पाकिस्तान तालिवानलाई बलियो ढंगले सरकार चलाउन चाहन्छ र अफगानिस्तान त्यस्तो अवस्थामा पुग्न सक्दैन जहाँ यस्ता मानिसहरुको सरकारमा कुनै नियन्त्रण छैन।
पाकिस्तानको अर्को प्रमुख चासो शरणार्थी संकट हो। पाकिस्तानमा पहिले नै ३ मिलियन अफगान शरणार्थीहरु बसोबास गरीरहेका छन् र यो अब धेरै शरणार्थीहरुलाई आश्रय दिने स्थितिमा छैन। बेलायतका लागि पाकिस्तानी उच्चायुक्त मोअज्ज्म अहमद खानले बीबीसीलाई भने, हामीसँग अब अरु शरणार्थीहरुलाई स्वीकार गर्ने क्षमता छैन र यसैले हामी सुझाव र अनुरोध गर्दैछौं कि हामीसंगै बसौं र कुनै हानी हुने सम्भावनाबाट बचौं ।
अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडेनले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानको फोन समेत उठाएनन्
पश्चिमी देशहरुसंग पाकिस्तानको सम्बन्ध कहिल्यै धेरै राम्रो भएको छैन। राष्ट्रपति बनेपछि जो वाइडेनले प्रधानमन्त्री इमरान खानसँग फोनमा कुरा गर्न समेत अस्वीकार गरे।
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार लेफ्टिनेन्ट जनरल एचआर म्याकमास्टरले यस हप्ता एक सेमिनारमा भने कि पाकिस्तानले जिहादी समूहहरुलाई समर्थन गर्न बन्द नगरे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बहिष्कार गर्नु पर्छ।
उनले भने,’ हामीले पाकिस्तान एक साझेदार देश हो भनेर बहाना गर्न छोड्नु पर्छ। पाकिस्तानले यी सेनाहरुलाई परिचालन गरेर, उनीहरुलाई तालिम दिएर र अन्य सहायता प्रदान गरेर र जिहादी संगठनहरुलाई परराष्ट्र नीतिको हिस्साको रुपमा प्रयोग गरेर हामीलाई शत्रुको व्यवाहार गरिरहेको छ ।’
अमेरिकाको यो दृष्टिकोणको बावजूद, अन्य पश्चिमी देशहरुले पाकिस्तानको ढोका ढकढक गर्न बन्द गरेका छैनन् । पछिल्ला केही दिनहरुमा बेलायत र जर्मनीका विदेश मन्त्रीहरु इस्लामाबादको भ्रमण गरेका छन्। यस्तै एउटा भ्रमण इटाली पक्षबाट प्रस्तावित छ।
कूटनीतिक विज्ञहरु मान्छन् वा अर्को शब्दमा उनीहरु तालिवानमाथि पाकिस्तानको प्रभाव रहेको छ। उनीहरुलाई पाकिस्तानलाई टाढा राख्नुको अर्थ अफगानिस्तान र चीन बीचको सम्बन्ध अझ बढ्ने भन्ने पनि डर छ । जे होस्, यो प्रश्न पक्कै उठ्छ कि के पाकिस्तानको साँच्चै तालिवानमाथि गहिरो प्रभाव छ ?
जिन मुल्ला गÞनी बरादर नयाँ तालिवान शासनको नेताको रूपमा नाम लिइरहेको छ । उनले विगतमा लामो समय पाकिस्तानको जेलमा बिताएका थिए ।